SAWIRRO: Khasaaraha qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho – Warfaafiye:
SAWIRRO: Khasaaraha qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho
Ali Mohyadin Sep 11, 2017 0
Qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ku qarxay agagaarka hotel Wehliye ee ku yaal wadada Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay seddax qof 14 kalena waa ku dhaawacmeen.
Qaraxa ayaa dhacay gelinkii danbe ee Isniinta, waxaana gaariga la dhigay meel u dhow maqaayad aan ka fogeyn hotelka Wehliye, waxaana halkaasi ku dhaqayay wiil yar oo ninkii waday gaariga uu u balan qaaday inuu siinayo lacagta marka uu gaariga dhameeyo dhaqidiisa.
Waddada Maka-Almukarama waxa toddobaadyadii ugu dambeeyay ku soo badanayay qaraxyada loo adeegsado baabuurta ee la dhigo hareeraha waddada xilli laga mamnuucay waddadaasi in wax gaadiid ah la dhigo, taasoo su’aal gelinaysa sida kuwa baabuurta qaraxyada wada ay ugu suurtagasho in ay waddada dhinceeda ay dhigaan.
Qaraxan ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalintii shalay ahayd iyo jimcihiiba ay qaraxyo ka dhaceen Beledweyne iyo Baydhabo, qaraxyadaasi oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen.